Moe Kai: ဘာသာစကား
တခါတလေ အလွန် စိတ်အားထက်သန် လွန်းလှတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဆေးအကူမ လေးတွေက မစောင့်နိုင်၊ အတင်းကာရော သွားဆွဲ သွားမေးခွန်းတွေ ထုတ်တာ တွေ. ကြုံရင်တော့ ကျမ ဒီအားကစားသမားတွေကို စိတ်ထဲမှ သနား ကိုယ်ချင်းစာမိသလုိုပါပဲ။ ချော်လဲ ဒါဏ်ရာရလို.နာတာ ကျင်တာ ကတမျိုး၊ အရိုးများကျိုးလားလို. ပူတာကတမျိုး၊ လူအများ ဝိုင်းကြည့်နေတုန်း ဖြစ်တာဆိုတော့ ရှက်တာကတမျိုး၊ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ စကားတွေနဲ. လာအတင်းမေး ဆွဲနေတဲ့ သူတွေ ကြောင့် တမျိုး စိတ်ဖိစီးတာတွေ ပိုပြီး အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ စကားပြောတဲ့ နိုင်ငံရောက်သွားရင် အရမ်း စိတ်ပူရတယ် မဟုတ်ပါလား။ လမ်းပျောက်နေရင် ဆိုတာကစလို. အိမ်သာရှာမရတာက အဆုံးပေါ့။ ပထမဆုံး ကိုယ်တွေ. အတွေ.အကြုံကတော့ စပိန်သွားတုန်းကပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စကား လုံးလုံး မပြောတတ်တဲ့ စပိန်နိင်ငံသားတွေနဲ. ပထမဆုံးနေ.က ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ “ရေချိုး အဝတ်လဲခန်း ဘယ်မှာလဲ” လို. မေးတာကို သူ.ရေပုံးတောင်းတယ် ထင်လို. အတင်းထွက်ပြေးတဲ့ သူနဲ.တွေ.ဖူးသလို၊ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဘာအသားနဲ. ချက်တာလဲ မေးတာကို ဆိုင်ရှင်က “ဘွဲ အဲ အဲ” လုို.ပြန်ဖြေလို. “အမ် အဲတာ ဆိတ်လား၊ အမဲသားလား” ဆိုတာ တော်တော် ပြန်သုံးသပ်ရပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အန္ဒိယတို. ပါကစ္စတန်တို.က ဒီ အင်္ဂလန် နို်င်ငံမှာ နှစ် ၅၀ ကျော်နေပြီး အင်္ဂလိပ်စကား တလုံးမှ ကို မပြောတာတွေ ဆေးရုံမှာ မကြာခဏ တွေ.ရတာကိုတော့ နဲနဲ ထူးဆန်းတယ်လို. ထင်မိပါတယ်။ ဘာမှ မေးလိုမရပဲ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး နာနေတာ ဆိုတော့ ဘာဖြစ်မှန်းလဲ မသိ အင်မတန်မှကို ကုရခက်ပါတယ်။
နောက်ဆိုရင်တော့ smart phone တွေမှာ တကယ်ကောင်းပြီး အသုံးတဲ့လောက်မဲ့ ဘာသာပြန် applications လေး တွေ ပေါ်လာရင်တော့ ဒီပြဿနာ ကင်းသွားမယ် ထင်ပါတယ် နော ..